Maxay ahayd aragtida ay dadka afrikaanka ahi naftooda ka qaateen ganacsiga addoonsiga? - Mu'asasada Afrikhepri
maalin-jimce, Juun 23, 2021
Dhaqanka Afrikaanka ah ee isu haysta ganacsiga addoonta
Muxuu ahaa aragtida dadka Afrikaanka ah laftoodu ka qabaan ganacsiga addoonta?
Akhrinta: 15 daqiiqo
TheDabeecadda ay dadka Afrikaanka ahi ka qabaan aaggan waa mawduuc aan weli si weyn loo baran, laakiin durba marar badan laga been abuurtay. Ganacsatada addoommada iyo cunsuriyiinta ayaa ka been abuurtay waagaas, maalmahanna, waxay noqotay markhaatiyaasha taariikhyahannada bourgeois ee jihaynta gumeysiga iyo neo-gumaysiga. Waa mowduuc adag, waxayna noola muuqataa inay Afrikaanku wali haysan qalab ku filan oo ay ugu sii gudbaan daraasaddeeda rasmiga ah. Sida gobollo kale oo badan oo adduunka ah, Afrika waxay la kulantay addoonsiga iyo ka ganacsiga addoonsiga ka hor imaatinka reer Yurub, sidaan horayba ugu soo qeexnay shaqadan. Tani waa sababta markii ugu horreysay, dadka reer Yurub ay bilaabeen inay iibsadaan addoomo, iyagoo galaya xiriir ganacsi oo lala yeesho Afrikaanka, waxaa loo tixgeliyey heshiis ganacsi oo caadi ah.
Si kastaba ha noqotee, bilawgii, kulamadii reer Yurub iyo Afrikaanku dhif iyo naadir bay ahaayeen. Badmaaxyo hubaysan ayaa isku tuuray Afrikaantii kalsoonida kuyimid ama cabsi darteed inay lakulmaan nimankan cadaanka ah ee aysan waligood arkin, waxay dileen kuwa kahor yimid kuwa kalena way qaateen, iyagoo kuxiran, markabkooda.
In kasta oo ay jirto awood ka sarreysa hubka, gumeystayaashu ma jebin karin Afrikaanka, waxayna ku dhiirrigelinayaan cabsi joogto ah. "Taleefanka maxaliga ah", taasi waa in la yiraahdo, calaamadaha qiiqa ama tom-tom, waxay muujiyeen muuqaalka shisheeyaha cabsida leh, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in ay in badan oo ka badan la kulmaan maya iska caabin, maxaa yeelay iska caabinta furan ee Boortaqiiskii ku hubeysnaa qoryaha wax aan macquul aheyn, laakiin cadaawad joogto ah iyo mid maalinle ah, markii suurtagalnimada ugu yar laga faa'iideystay in la weeraro. Weeraro kedis ah, fallaaro sumeysan ayaa si isdaba joog ah u soo dhoweeyay reer Yurub.
Gonçalo de Cintra, oo ka mid ahaa kabtannadii ugu horreeyay ee Boortaqiiska ee cagaha dhigta dhulka Galbeedka Afrika, ayaa lagu dilay duleedka jasiiradda Arguin.
Sannadkii 1455-kii, Luigi di Cadamosto iyo Antonio Uso di Mare, oo markii ugu horreysay gaadhay Gambiya, waxay go’aansadeen inay webiga fuulaan. Si kastaba ha noqotee, Afrikaanku waxay weerareen maraakiibtooda iyagoo aad u xanaaqsan oo badmaaxyadu diideen inay safarkooda sii wataan waxayna ku adkeysteen inaan dib u laabanno.
Marka loo eego xaaladaha dhabta ah ee Afrika ee qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad, ma jiri karin kacdoonno waaweyn, oo abaabulan oo ka dhan ah reer Yurub. Gobollada uu kan dambe soo galay oo markii dambe noqday aagga ballaarinta ganacsiga addoonsiga, ma jirin wax qaab dhismeed dowladeed oo ballaaran ah. Siyaasadda gumeystayaashu waxay u janjeersatay inay khilaaf ka dhex abuurto ugaasyada qabaa’ilka kala duwan. Reer Yurub waxay gadaashooda ku lahaayeen dalalkii ugu horumarsanaa waqtigooda, iyagoo wata qalabkooda iyo khibradooda ciidan. Bilowgii, Afrika waxay kaliya ku mucaaradi jirtay hubka yurub ee leh qaansooyinka iyo fallaaraha, kooxo yaryar oo dagaalyahanno ah oo ka socda qabiilooyinka go'doonsan.
Inay raadsadaan in ay degaan xeebta, colonizers, oo hor taagan madaxbannaanida geeska Afrika, ayaa lagu dhisay qalalaaso si looga badbaadiyo weerarrada dadka deggan gobolka.
Kuwani may ahayn dhismeyaal ku-meel-gaadh ah, oo deg deg loo dhisay, waxay ahaayeen qalcado deyr leh oo leh derbiyo dhaadheer waxaana lagu soo wareejiyey tiro gogo 'madaafiic ah. Dhufaysyadan waxaa iska lahaa dalal kala duwan oo wakiiladooda ganacsi inta badan xiriir xun uu ka dhexeeyo. Qalcadahaas kama difaaci karin yurubiyanka cadaanka kale: madfacyada ayaa si fudud uga gudbay darbiyada, sida dadka asaaga ahi u arkeen. Way cadahay in, bilawgii, qalcadahaas loo dhisay ujeedada kaliya ee ay iskaga difaacayaan dadka degan wadanka.
Maalmihii hore, reer Yurub waxay had iyo jeer ku guuleysteen inay iska caabiyaan kuwa soo weeraray. Laakiin markii Afrikaanku barteen inay adeegsadaan qoryaha, oo markii hore argagax geliyay, haddana mararka qaarkood way guuleysteen, in kasta oo ay caro weyn kala kulmeen gumeystayaashu, iyagoo qaatay qalcado iyo warshado dab qabadsiiyay. Tani waa tan inta badan dhacday qeybtii labaad ee qarnigii XNUMXaad.
Daabacadaha shisheeye ee loogu talagalay ganacsiga addoonta, weerarada qalcadaha iyo warshadaha waxaa badanaa lagu macneeyay waxa loogu yeeray bahalnimada Afrikaanka iyo dhadhanka ay u leeyihiin dhaca. Mararka qaar cadaawaddooda waxaa lagu eedeynayay siyaasadaha gumeystayaasha oo doonayay inay waxyeelo inta ugu macquulsan u geystaan ​​kooxaha ay xafiiltamaan, oo ay ugu horeyso ganacsi, ka dibna gumeyste, iyagoo adeegsanaya dadka degan gobolka.
Waxaa hubaal ah in siyaasada ku saleysan mabda'a "qeybi oo xukun" ay saameyn ku yeelatay ficillada dadka Afrikaanka ah, laakiin in la sharaxo weeraradooda ka dhanka ah reer Yurub iyaga oo kaliya ka codsanaya in si aad ah loo yareeyo dagaalka dadka Afrikaanka ah. Tallaabooyinkan waxaa ugu horreyntii sharraxay nacaybka soo duulayaasha.
Dagaalkii lagula jiray gumeystayaashii reer Yurub iyo gumeystayaashii waxaa si gaar ah loo geeyay muddadii ka horreysay qarnigii XNUMX-aad oo ahayd, Afrika, qarnigii ganacsiga addoomaha. Muddadan, dhammaan siyaasadaha Yurubta ee Galbeedka Afrika waxaa ku xirnaa ganacsigan. Tani waa sababta iska caabinta Afrikaanka qarnigii XNUMX-aad ay ahayd in lagu wajaho ganacsatada addoomada ah. Si kastaba ha noqotee, isbarbar yaac sida ay ugu muuqan karto jaleecada hore, ma jirin kacdoon Afrika ka dhan ah ganacsiga addoonsiga. Illaa iyo hadda, ugu yaraan, wax macluumaad ah kama hayno tallaabooyinka noocan oo kale ah.
Dhanka kale, oo waxaan haynaa markhaatiyaal badan, kacdoonnada addoonsiga ayaa aad u soo noqnoqday intii lagu jiray safarka guud ahaan Atlantic mana dhammaanin, sidoo kale, deegaannadii Dunida Cusub. Gabagabadii ay taariikhyahanada bourgeois gaareen, si fiican loo yaqaan oo had iyo jeer ay taageeraan ganacsatada addoomada iyo gumeystayaasha, waxay ahayd kuwan soo socda: Afrikaanku waxay yaqaaneen addoonsiga muddo dheer, waxayna u noqotay xaalad caado ah, ma aysan mudaharaadin. taas ka soo horjeedda. Taasi waa sababta aysan u jirin kacdoon addoon Afrika. Maraakiibta iyo beeraha cusub ee aduunka, dadka afrikaanka ah waxaa loola dhaqmay si arxan daro ah, waana sababta ay u gadoodeen una baxsadeen fursadii ugu horeysay. Uma cararin sababo la xiriira ma aysan dooneyn inay noqdaan addoomo, laakiin waxay u adkeysan waayeen in si arxan darro ah loola dhaqmo, waxay caddeeyeen qeybaha ganacsiga addoonsiga. "Si wanaagsan ula dhaqan adoomaha Afrikaanka ah, mana jiri doono kacdoon dambe," ayay ku celiyeen kuwa difaacay ka ganacsiga addoonsiga.
Dhinaca kale, iyagoo muujinaya inay ahayd wax la jeclaan karo ganacsiga addoonta Atlantika inuu sii socdo, isla dadkani waxay caddeeyeen in dhoofinta Afrikaanka ee dalkooda ay u fiicantahay iyaga maxaa yeelay, sida la filayo, addoonsiga Afrika waa aad uga xun aduunka cusub, in maxaabiistu ku nool yihiin nolol aad uga wanaagsan beeraha America iyo West Indies marka loo eego guriga. Si la yaab leh ayaa ku filan, sheegashada koowaad iyo tan labaad ee ganacsatada addoonta ah weligood wali lama hor imaan. Iyaga oo ku saleysan, mid baa filan kara kacdoonno isdaba joog ah oo ka dhan ah ganacsiga addoonsiga ee Afrika, laakiin ma aysan dhicin.
Sidee ayay tahay, dhammaantood isku mid, in uusan jirin dagaal ka dhan ah ganacsiga addoonsiga ee reer yurub eek u yaal badweynta Atlantik, laakiin kaliya ay ahayd iska caabin addoommo go'doon ah, oo doonayay inay naftooda badbaadiyaan? qoysaskoodana ka badbaadiyey addoonsiga? Maxay u awoodi weyday kuwa u suurtagashay inay ka baxsadaan gawaarida addoonsiga ah inay badanaa ku tiirsanaadaan gargaarka dadka maxalliga ah, inay rajo ka qabaan in la qarin doono oo laga caawin doono inay ku noqdaan dalkooda? Haddii qof uu la kulmo addoon baxsad ah, wuxuu had iyo jeer ka iibiyaa baxsadkaas addoon reer Yurub ah ama baayacmushtar Afrikaan ah.
Si aan u fahanno xaaladda xaaladdan, waa in aan ka fekeraa xaqiiqada Afrika ee qarnigii siddeedaad, isku dayay inaan fahanno maskaxda nimankan, in ka badan laba boqol sano, waxay ku noolaayeen xaaladaha caqabadda ka saara ganacsiga addoonta.
Muddadii ay tahriibintu socotey waxay caado ka dhigatay Afrikaanka, oo naxariisdarradiisa ayaa loo aqbalay inay ku taalo ifafaalaha. Dadku waxay ka dhigteen mihnadooda, waxay ahayd il dakhli joogto ah. Qof kasta oo la xado, la afduubto, ka tabar daran naftiisa, wuxuu keeni karaa faa'iido la taaban karo oo dhakhso leh: alaabo, hub, khamri.
Waqtigaas, waxqabadka ugu faa'iidada badan ma ahayn shaqo wax soo saar leh laakiin ugaarsi, dagaallo ujeedkoodu ahaa in maxaabiis lagu qabto si loo iibiyo.
Qofna ma rabin inuu noqdo dhibbane waana sababtaas darteed dhammaantood waxay doonayeen inay noqdaan ugaarsadeyaal. Si aan adoonsiga loogu helin Afrika muddadan, waxay ahayd inaad adigu adigu noqoto ganacsade addoon ah, iibiso kuwa kale, oo aad si joogto ah naftaada u xusuusiso in qof kale, ka caqli iyo nasiib badan, uu qaban karo. adigu waqti kasta oo aad iska iibiso addoonsiga reer Yurub.
Ka ganacsiga addoonsiga ayaa ahaa isha qiimo-dhaca foosha xun ee nolosha aadanaha. Waxay u horseeday nabaad-guur akhlaaqeed, la waayo sifooyinkii ugu fiicnaa ee aadanaha, qallooc maskaxeed, dullin niyadeed ee ganacsatada addoomada iyo sidoo kale kuwa la haysto laf ahaantooda
Rag iskuma keenin ee way kala gaysay, way go'doomisay, waxay sabab u noqotay go'doominta cajiibka ah ee qabiilka kuwa kale, shaqsi ka yimid kuwa kale. Qof walba wuxuu isku dayayay inuu badbaadiyo naftiisa, sidoo kale inuu badbaadiyo eheladiisa ugu dhow, isagoon ka fakarin dadka kale.
Nasiib darrose, ma jiraan wax dukumiinti ah oo la xiriiri kara sida kooxaha aadanaha ee kala duwan ay ugu hoos galeen addoonsiga. Qaarkood ma aysan laheyn geesinimo inay si furan ula dagaallamaan, waxay u dhinteen nostalgia, way isdileen ama shaqeeyeen, waxay ku sugayeen dhimasho taxaddar la'aan. Daaweynta naxariis darrada ah ka sokow, weli waxaa jiray guri-la'aan, hilaadin aan dib loo soo celin karin. Raggaasi yay ahaayeen? Qaarkood waxay ahaayeen khaa'inul waddan, waxay noqdeen kormeerayaal asxaabtooda nasiib darro. Yey ahaayeen? Maxay yihiin jahawareerka bulshada ee ay ka tirsanaayeen?
Waan ognahay in iska caabbinta ganacsiga addoonta, afduubka maxaabiista ay ka jirtay Afrika: dadku way ka baxsadeen safarkii addoonka, waxay iska caabiyeen markii la gaadhay xilligii ay rarka ku rari lahaayeen maraakiibta. Socotada ayaa soo sheegay inay arkeen tuulooyinka ay ku hareeraysan yihiin alwaax aad u dhaadheer oo alwaax ah, oo awood u leh inay ka difaacaan weerarada ugaarsadayaasha addoonsiga ah. Laakiin haddii aan hayno wax macluumaad ah oo ku saabsan baxsashada gawaarida addoommada, ma jiraan wax xisaab ah oo ay baxsadeen ku guuleysteen inay ku noqdaan guryahooda. Goobjoogayaal ayaa sheegay in dadkan mar kale laga qabtay jidka oo laga iibiyey ganacsatada addoomada ah.
Addoommadii baxsadka ahaa si arxan-darro ah ayaa loogu ciqaabay Dunida Cusub, laakiin weli waxaa jiray nacasyo bunni ah oo ku yaal Jamaica iyo Cuba, oo ka cararaya tuulooyinka addoommada ee Brazil, boqolaal ka mid ah kacdoonnada Mareykanka. Maxay dadkan, oo aan si cad uga soo horjeedin ka ganacsiga addoonsiga Afrika, ay uga gadoodeen Adduunyada Cusub? Ka soo horjeedka ayaa macno badan yeelan lahaa. Naxariis darrada beeraleyda miyay ahayd sababta kaliya ee baxsadka iyo kacdoonka? Malaha maya. Waxay noqon kartaa maqnaanshaha kacdoonnada ka dhanka ah addoonsiga ganacsiga ee Afrika iyo kacdoonnada isdaba jooga ah ee addoommada adduunka cusub ayaa markhaati furaya, marka horeba, illaa heerka horumarka ganacsiga addoonsiga ee Afrika, sidoo kale xaqiiqda ah inay aad buu u faafay cawaaqibkiisuna aad ayuu uga qoto dheer yahay inta aan filayno.
Wadammada Dunida Cusub Afrikaanku waxay ka gadoodeen wax kasta oo ka dhan ah addoonsiga, kuwaas oo had iyo jeer ka soo horjeeday ka ganacsiga addoonsiga. Kacdoonada maxaabiista Afrikaanka ah ee ka dhacay Ameerika iyo West Indies ayaa marag ka ah oo cadeynaya in dad badan oo Afrikaan ah ay ka soo horjeedaan ka ganacsiga addoonsiga oo ay ka mudaaharaadeen addoonsiga. Si kastaba ha noqotee, Afrika, wax kama qaban karaan arrintan, maxaa yeelay haddii ay kaliya diyaarsadaan ficillo isku mid ah ama ay ka hadlaan, waxaa isla markiiba laga iibiyay ganacsatada addoommada reer Yurub ama la dilay. Ma jirin meel ka mid ah qaaradda oo qofku ka baxsan karo ka ganacsiga hilibka aadanaha. Waana sababtaa tan ilaa hadda aynaan garanaynin hal kacdoon weyn, oo lagu wajahayo taraafiggan. Afrikaanku mararka qaar way ku qanacsanaayeen inay isdifaacaan laakiin weligood ma aysan qaadin weerar ka dhan ah ganacsatada addoomada ah Caabbinta firfircoon waxay had iyo jeer ahayd geesinimada ay abuurtay quusta shakhsiyaadka tirada yar, badiyaa waxay ku dhacdaa fashil.
Dhinaca kale, sheegashada in Afrikaanka aysan ka mudaaharaadin xaaladda addoonsiga maxaa yeelay caado ayey u ahayd gabi ahaanba waa been. Taas bedelkeeda, laga soo bilaabo xilligii lagu qabtay dhulkooda hooyo iyo illaa dhammaadka noloshooda ee beero ka mid ah West Indies iyo Ameerika, Afrikaanku weligood kama ay joogsan halgankii ay kula soo noqdeen xorriyadda. Badanaa waxay ka doorbidayeen geerida addoonsiga markay arkeen inaanay jirin rajo laga qabo inay is-xoreeyaan.
Gawaarida dhexdooda, addoomada ayaa gacmahooda lagu xiray, waxaa lagu xiray qoorta oo ay galbiyeen ilaalada ku hubaysan ilkaha, addoomo. Iyo, in kasta oo ay taasi isku dayeen inay ku cararaan fursadda ugu yar ee habboon.
Ganacsatadu waxay sameeyeen intii karaankooda ahayd inaysan addoommada la qabtay guryahooda ku haysan muddo dheer; waxay ka baqayeen kacdoonno iyo baxsad. Warshadaha sifiican ayaa loo ilaaliyay: madfacyada lagu tilmaamo gidaarada, qayb kamid ah loo rogay dhanka gudaha oo loola dan leeyahay barxada addoomada: kan dambe ayaa badanaa fallaagoobay.
Ganacsatada addoomaha ah waxay rumeysnaayeen in addoommada inta badan ay isku dayaan inay cararaan markii laga soo raro xeebta lana geeyo markabka. Ilaa waqtigaas, ma aysan maleynin aayahooda mustaqbal waxayna rumeysan yihiin in lagu iibinayo dalkooda. Hadana waa halka halganka uu ahaa mid aan micno lahayn, maadaama ganacsatadii addoonsiga ay si gaar ah u daawadeen Afrikaanka intii lagu jiray hawlgalkan. Addoommadii silsiladaha ahayd ayaa isku tuuray badmaaxyadii iyo waardiyayaashii, waxay ku boodeen badda, laakiin silsiladihii ayaa u saamixi waayey inay dabaashaan wayna ku hafteen. Sida ay goobjoogayaashu qoreen, haddii nin madow oo isku tuuray biyaha uu arko doomo saf ah, oo ay wateen dad reer Yurub ah, oo u soo dhowaanayay si uu biyaha uga soo saaro, wuxuu ka jeclaan lahaa inuu dhinto inuu naftiisa u oggolaado inuu qabsado markabka addoonku.
Addoommadii daalay, ayaa lagu raray markabka, waxayna soo ururiyeen dhammaan ciidammadoodii si ay dib ula soo noqdaan xorriyadooda. Kuwii ugu adkaa uguna go'aanka badnaa waxay galeen halgan firfircoon: waxay kiciyeen kacdoon, waxay weerareen shaqaalihii markabka addoonta ahaa, mararka qaarkood xitaa way qabsadeen markabka. Kuwii aan lahayn xoog ama geesinimo inay farageliyaan waxay si cad uga hor yimaadeen ganacsadaha addoonka ah si is daba joog ah, madax adayg iyo adkaysi leh.
Xaaladaha khaaska ah ee ganacsiga addoonsiga, oo horay u xukumay inta badan kacdoonnada, waxay keeneen noocyo gaar ah oo cabsi badan oo iska caabin dadban intii lagu jiray "safarka". Ku waalatay rajo la'aan, addoomo badan ayaa doorbidaya inay dhintaan halkii ay sii ahaan lahaayeen maxaabiis. Waardiyeyaashu inta lagu gudajiray "marinka dhexdhexaadka ah" waxay ahayd inay hubiyaan in addoomadu aysan ka boodin. Badanaa inta lagu jiro kacdoonnada, markay Afrikaanku arkeen in ka addoonsadayaasha addoommadu ay yihiin kuwa ugu xoogga badan, iyaguna sidoo kale way qodeen.
Nooc kale oo iska caabin ah ayaa ahaa diidmada quudinta, taas oo keentay cudurrada faafa ee saaran markabka iyo dhimashada ballaaran ee maxaabiista. Karbaashka, jirdilku wax caawimaad ah malahan: Afrikaanku ma rabin inay addoomo noqdaan. Qaar badan oo ka mid ah ganacsatada addoonta ayaa sheeganayay in sababta kaliya ee diidmadaan quudinta ay ahayd noloshayda.
Qaabkaan naftiisa loogu ogolaanayo inuu dhinto wuxuu ahaa mid aad ugu baahsan Afrikaanka dhexdiisa oo England gudaheeda, marka lagu daro birta, silsiladaha, silsiladaha iyo xirxirayaasha xirmooyinka loogu talagalay addoomada, aalado bir ah oo gaar ah ayaa la sameeyay kuwaas oo la galiyay afka addoomada. diidista inay wax cunaan, maadaama ay u oggolaatay inay xoog ku quudiyaan.
Waliba kuwa kale waxay isku dayeen inay si furan ula dagaallamaan, ficillada ugu quusta badnaa waxay dhaceen markii markabkii addoonta ahaa uusan weli ka fogeyn xeebta Afrika. Afduubayaasha ayaa rajeyn kara inay dib ugu laabtaan dalkooda ay ka yimaadeen.
Isgaarsiinta ku saabsan kacdoonnada dusha ka saaray ganacsatadii addoonsiga waxay noqotay wax caadi ah qarnigii 30-aad dukumiintiyada gumeysiga. Waraaqo ayaa la keydiyay oo laxiriira kiisas badan oo caymiska khidmadaha lasiiyay milkiilayaasha maraakiibta ku burburay kacdoonkii addoonsiga. XNUMX-yadii qarnigii XNUMXaad, ganacsatada Bristol waxay ka cawdeen in dakhligoodu hoos u dhacayo ganacsiga addoonta madow. Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee ifafaalahan ayaa ahaa kacdoonnada addoonsiga ee ka dhex jira ganacsatada addoommada ah.
Difaacayaasha ganacsiga addoonta waxay rabeen inay caddeeyaan in kacdoonnada maraakiibta ay ka dhaceen oo keliya meelaha u dhow xeebta Afrika, in ka dib ay dadka Afrikaanka ah adeegsadeen, sida loo maleynayay, gobolkooda, in dhammaan dhibaatooyinka intii lagu jiray safarka guud ahaan Atlantikada waxaa kaliya lagu macnayn karaa daaweynta xun ee ay u geysteen shaqaalaha. Sheegashooyinkani gabi ahaanba uma dhigmayaan runta. Waxaan si sax ah u haynaa xaddiga ugu badan ee macluumaadka ku saabsan kacdoonnadii dhacay intii lagu jiray "safarka". Kabtanadu sida caadiga ah waxay siinayaan milkiileyaasha maraakiibta ama maamulka shirkadda warbixin qoraal ah oo ku saabsan dhacdooyinka muddada safarka.
Xiriirka ku saabsan maraakiibta maqan ayaa la duubay.
Warbixinada laga helay kabtanada addoonka waxay tilmaamayaan in u diyaar garowga "safarka" la sameeyay iyadoo la fahamsan yahay inuu dhici karo kacdoon addoon waqti kasta. Waxaa la dareemay in waqtiga ugu halista badan uu ahaa markii cuntada la qeybiyay. Waxaa xayndaabyo laga sameeyey hareeraha meeshii lagu qaybiyey. Badmaaxiintu waxay isdul taageen darbiyada gadaashooda iyagoo wata qoryahooda ay ku raran yihiin. Qoryaha markabka waxaa loola dan lahaa addoomada, qoryaha ku taagan qoryaha agtiisa oo leh fiyuus shidan. Birta ragga addoommada ah maalin walba waa la hubin jiray.
Kacdoonadan intii lagu jiray "safarka" waxaa lagu kala soocay rabshado gaar ah maadaama shaqaalaha markabka iyo addoommada midkoodna uusan sugi karin meel aan caawimaad ka helin oo labada dhinacba ay u dagaallamayeen noloshooda.
Markii kacdoonka la dejiyay, ganacsatadii addoonsiga waxay addoonsiga ku ciqaabeen naxariis darro. Si kastaba ha noqotee, waxqabadka ama jirdilku midkoodna ma joojin karin maxaabiista. Waxaa jiray kiisas markii addoommadii laba jeer ku gadoodeen isla doonnidii xilligii "safarka".
Waxaa jiray mararka qaar isgaarsiin kooban oo ku saabsan qaadashada maraakiibta addoommada, iyada oo aan la ogeyn waxa meesha ka dhacay.
Hadday, ka hor, imaatinka addoon hortiisa lagu arko xeebaha ay cabsi ku dhex beertay Afrikaanka: waxay si tartiib tartiib ah u ogaadeen in weerar lama filaan ah lagu guuleysan karo. Hadday ahaan lahayd markab weyn oo sifiican u hubaysan, way iska ilaaliyeen inay weeraraan, laakiin markay timaado doomaha yaryar, kooxo Afrikaan ah oo ku hubaysan qaansooyinka iyo fallaaraha oo keliya laakiin sidoo kale hub. badanaa ku dul fuula weerarka. Inta badan tani waxay dhacday markii addoommadu ku fallaagoobeen markabka, taas oo kordhisay fursadaha guusha. Afrikaanku uma baahnayn maraakiibtaan, markii ay qabsadaanna way gubeen ama haddii kale waxay cabireen barroosinka si markabku uga leexdo. Maraakiibtan ayaa la waayey meel ay jaan iyo cirib dhigeen.
Waxaan ku qori karnaa dherer kiisaska doomaha lagu afduubto addoomaha, laakiin imisa tusaalooyin oo iska caabin ah ayaa ku hadhay hooska? Tiro ka mid ah maraakiibta addoonta ayaa la waayey iyagoon ka tagin wax raad ah intii lagu jiray "safarka". Dadka Afrikaanka ah, markay doonta qaateen ka dib laakiin garan waayey sida loo xukumo, waxay u dhimanayeen gaajo iyo harraad, oo waxay ku burbureen qarar. Badmaaxyaashu waxay soo sheegeen inay la kulmeen maraakiib ay ku dhinteen shaqaalihii reer Yurub, addoommaduna waxay ku jireen xaalad daal aad u daran, nus-nool. Maraakiibta kale, waxaa ku jiray oo keliya meydadka la addoonsado ee addoomaha ama, liddi ku ah, kaliya badmaaxiinta la dilay.
Shucuub badan oo Afrikaan ah waxaa ka jira aaminaad ah in nafta ninku, geeridiisa ka dib, meel kasta oo uu ku dhinto, ay ku noqoto dalkiisii ​​hooyo.
Haddaba hal fiid ah markii safarkii addoommada ahaa uu istaagay habeenkii, David Livingstone wuxuu maqlay heeso.
Lix addoon ayaa u gabyay sidii iyagoo aan dareemayn culayska iyo ceebta harqoodkooda. Waxaan weydiiyay waxa keenay farxadan oo kale, waxaa la ii sheegay inay rajeynayaan inay dib u soo laabtaan geeridooda ka dib oo ay u muuqdaan kuwo cirfiid ah si ay u dilaan kuwii iyaga iibiyay ... Mid iyaga ka mid ah ayaa ku heesayay: "O, adigu, waxaad ii soo dirtay Mantis (xeebta), laakiin markaan dhinto, harqoodku wuu dhici doonaa, aniguna waxaan ku laaban doonaa gurigeyga si aan isugu muujiyo oo aan kuu dilo. "Markaa intii kale oo dhami waxay dib ugu bilaabeen koox kooxeed oo ereyada diidmada waxay ka koobnaayeen magacyada kuwii ka iibiyey addoomo" [208, v. 1, bog. 306]
Ganacsatada addoomaha ah ayaa inta badan sheegay in is-dilka dadka Afrikaanka ah ee ka ganacsada addoommada ay ka dhalatay aaminsanaanta ah inay guryahooda ku laaban doonaan dhimashadooda ka dib. Xaqiiqdii waxay ahayd sababta keentay tiro dad ah oo isdilay. Si kastaba ha noqotee, haddii niyadsamida waddanka lagu qasay rabitaanka aargudashada ganacsadaha addoonta ah, nimankani runtii way iska daayeen inay dhintaan. Inuu dhinto si markaas uu awood ugu yeesho qofka iyaga iibiyey inuu ku bixiyo ficilkiisa!
Ganacsatadu sida caadiga ah waxay xusayaan in si khaldan loo khalday dadyowga qaarkood iyo qabiilooyinka qaarkood ee Afrika. Waxay dareemeen in taxaddar weyn la sameeyo haddii ay jiraan addoomo Mina iyo Koro-mantin ah, oo had iyo jeer diyaar u ah inay baxsadaan ama kacdoon sameeyaan. Qaar kale waxay sheegeen geesinimada dhirta, kuwa kale waxay kahadleen suurtagal la'aanta jebinta nafta isla weynida ee addoomada Ashanti ama haddii kale looga digay kacdoonka joogtada ah ee addoomada laga soo iibsaday gobolka Kilwa iyo Mom- bassa, iwm Shucuubta Afrikaanka ah, mid waliba gaar ahaan, wuxuu kaga yaabiyey reer Yurub diidmadii aan kala go’a lahayn ee ay u diideen meeqaamkoodii addoonnimo, rabitaankoodii ahaa inuu xoroobo, geesinimadooda iyo madax adeygooda halganka.
Caddaalad ma noqon doonto in la yiraahdo dadka qaarkiis waxay la dagaallameen ganacsatada addoomaha ah halka kuwa kalena ay aqbaleen xaaladdooda addoonnimo. Sida Afrikaanka Gold Coast, kuwa Xeebta Slave ay ula dagaallameen addoonsiga, kuwa Sierra Leone waxay ugu fallaagoobeen maraakiibta, iyo sidoo kale kuwa laga dhoofiyo xeebta Gacanka Benin iyo 'Angola, in maxaabiistu adoon ahaan uga iibiyeen meel aan ka fogayn Tête, Quelimane iyo Zanzibar.
Sidaa awgeed, iska caabbintaan adag ee addoommadii addoommadu waxay caddaynaysaa in dadka Afrikaanka ahi, sida dhammaan dadka ku nool meeraha iyadoon loo eegin jinsiyadooda, ay ku taamayaan inay ku noolaadaan xor. Laakiin rabitaankooda xorriyadda waxay la yimaadeen iyagoo aqbalay ka ganacsiga addoommada guud ahaan, mararka qaarkoodna u horseeday inay taageeraan.
Wadooyinka Addoonsiga: Taariikhda Tahriibka Afrika XNUMXaad-qarnigii XNUMXaad
4 cusub oo ka yimid € 19,50
2 waxaa laga isticmaalay € 29,56
Iibso € 19,50
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Juun 23, 2021 7:23
Bogagga aad jeceshahay
Xasilinta aamusnaanta: Dadka Asaliga ah ee Maraykanku waxay ku hanjabeen biyo ku yaal Amazon
Hordhac cilmiga sixirka - Rudolf Steiner (Audio)
Wadaaddada Masriyiintu, Herodotus iyo Diodoros ee Sicily
Sida loo diyaariyo Ndolé?
Waxay soo bandhigeen qalab casri ah oo lagu ogaanayo AIDS-ka iyo waraabowga
Noqo wax ku darsade
Guji astaanta si aad u dhajiso maqaal
Saxafiyiinta, borofisarada, aqoonyahanada, gudaha, qorayaasha, qorayaasha wax qora, waxaad ku soo gudbin kartaan maqaaladaada halkan.
Ka-qaybgalayaashii ugu dambeeyay